Shirkadaha Daallo Iyo Jubba Oo Iska Difaacay Eedeyntii Musuqmaasuq Ee Xujayda Ay U Jeediyeen | Raxanreeb.net
War qoraal ah oo ka soo baxay Laba shirkadood ee Duulimaadyada Diyaaradaha ee Jubba iyo Daallo Airline ayaa waxay kaga hadleen arrimaha Xajka iyo eedeymo loo soo jeediyey oo lagu dhaliilay sicirka tikidhada ay ka iibiyaan Xujeyda.
Labada shirkadood ayaa si wadajir ah uga sheekeeyey taariikhdii dowlad la’aanta ay Soomaaliya aheyd iyo kaalintii ay ka qaateen adeegga dadweynaha ee isaga goosha dunida dacaladeeda iyo weliba adeegga Xajka ay u fidiyeen dadweynaha Soomaaliyeed.
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ayaa waxaa socday olole ay masuuliyiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya wax kaga qabanayaan cabashadda dadweynaha eek u aadan arrimaha Xajka iyo dhaqaalaha faraha badan eek u baxa Xujeyda.
Akhri War-saxafadeedka oo sidan u qoran:-
Waxaan halkan idiinku sheegayna shaqsiyaad musuuuliyad qaran iyo xasaanad leh oo ummaddu u igmatay inay ka saran halaaga iyo dhibaatada adag ee ay ku jirto inay shaqo ka dhigteen olole been abuur ah oo lagu dhabarjebinayo shirkadaha ay masuuliyaddu farayso inay tabantaabiyaan. Waxay sheegan in xujaydda aan la siin adeeg fiican, lagana qaado sicir qaali ah. Waanu beeninayna, warkooduna wa fadeexad iyo ujeedo kale iyo dano shakhsi ah. Waxa hubaal ah in baroortu orgiga ka weyntahay. (Wa ku qabso ku qadi mayside.) Wadanka Somaliya weli shirkadaha caymiska waxa uu ugu qoranyahay goob dagaal, waxaana shirkaddaha laga qaada kharash caymis oo afar jibaaran, dulimaadyadda Xajku waa dulimaadya khaas ah, sida Kenya ama dalalka kale Xujayda lama saaro dulimaadyo caadi ah (Schedule flights). Sida darted dulimaad kasta oo xaji waa laba jeer ( TwoRotations). Shidaalku wa qaali, kharashaad dul saar ah oo badana wey jiraan. Sucuudigu sanadba sanadka kadanbeeya waxaa kordha kharashaadka xajka, kirooyinka iyo maceeshadda oo dhan. qofkii xogogaal uahi wuu ogyahay sicir bararka iyo samaynta barnaamijka Sucuudigu ka leeyay Xajka iyo Cimradda oo si gaar ah usoo kordhiya kharashaad joogto ah,iyada oo ay jiraan duruufahaas shirkaduhu waxay ku dadalayaan in sida ugu jaban ee surta gal ah Xujeyda ayugu shaqeeyaan.